Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah-Kushiinnada Jikada ugu Fiican 2020 | Tubooyinka Ugu Jikada Fiican | Qasabada jikada
Bogga ugu weyn / Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Sidee Wowowfaucet.com u ururisaa macluumaadka aniga igu saabsan?
Waxaan ka soo uruurinaa isticmaaleyaasha Site siyaabo badan oo kaladuwan, oo hadafku yahay in la bixiyo hufnaan, macno, iyo khibrad wax soo iibsasho oo gaar ah. Tusaale ahaan, waxaan u istcimaali karnaa macluumaadkaaga qaaska ah si:
* Diiwaangeliso oo dhaqso u soo qaado macluumaadka aad horay u siisay
* Waxay kaa caawin doonaan inaad si dhakhso leh u hesho macluumaad, alaabooyin, iyo adeegyo
* Abuur waxyaabo adiga kugu quseeya
* Kuu wargaliso macluumaadkayaga cusub, alaabada, iyo adeegyadeena
Diiwaangelinta iyo Dalbashada: Si loo isticmaalo qaybo ka mid ah Boggan ama alaab la dalbado, dhammaan macaamiisha waa inay ku buuxiyaan foom diiwaangelinta khadka tooska ah oo leh macluumaad shakhsi ah, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, magacaaga, jinsigaaga, rarka iyo cinwaanka biilasha (es), telefoonka lambarka, cinwaanka iimaylka, iyo lambarka kaarka deynta. Intaas waxaa sii dheer, waxaan weydiisan karnaa wadanka aad degan tahay iyo / ama wadanka aad ka shaqeyso ururkaaga, si aan ugu hogaansano sharciyada iyo xeerarka khuseeya. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa biil-siinta, ka-baaraandegidda dalbashada iyo suuq-geynta gudaha iyo sidoo kale inay kula soo xiriiraan amarradaada iyo bartayada.
Cinwaannada emaylka: Meelo dhowr ah oo ku yaal Bogga ayaa kuu oggolaanaya inaad geliso cinwaanka emaylkaaga ujeeddooyin ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn: isdiiwaangelinta ogeysiisyada xayeysiinta ee lacag-la'aanta ah, codsashada ogeysiinta marka noocyada cusub ama qaababka wax soo saarka ay yimaadaan, ama iska diiwaangelinta warsideheenna emayl. Intaa waxaa u dheer, kaqeybgal kasta oo tartanno xayeysiin ah oo ay soo agaasintay Wowowfaucet.com gebi ahaanba waa iskaa wax u qabso ah waxayna u baahan tahay in la shaaciyo macluumaadka lala xiriirayo ee loo baahan yahay si loogu wargaliyo guuleysteyaasha iyo abaalmarinta la bixiyo. Waxaan ku dhejin karnaa Magacyada iyo Magacyada tartameyaasha ku guuleysta Bartayada.
Dib-u-eegista Alaabta: Waxaan codsaneynaa cinwaan e-mayl iyo goob ay weheliso gudbinta dhammaan dib-u-eegista alaabada. Cinwaanka emaylkaaga si gaar ah ayaa loo hayn doonaa, laakiin goobtaada ayaa u arki doonta isticmaaleyaasha kale. Dhammaan macluumaadka kale ee shakhsiyadeed ee aad dooratay inaad u soo gudbiso iyadoo qayb ka ah dib u eegista waxaa heli doona booqdayaasha kale ee Bogga.
Sidee Wowowfaucet.com u isticmaashaa macluumaadkayga shakhsiyeed?
Adeegsiga Gudaha: Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed si aan u maamulno amarkaaga oo aan kuu siino adeeg macaamiil. Waxaan u istcimaali karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed gudaha si aan u soo aruurino macluumaadka guud ee ku saabsan booqdeyaasha Bartan, kor u qaadida nuxurka bogga iyo qaabka, hagaajinta wacyigelintayada, iyo suuq u helista adeegyadeena iyo alaabadayada.
Wadahadalka Aan kula Leenahay: Waxaan u adeegsan doonnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed si aan kaagala soo xiriirno wax ku saabsan Bartayada iyo amarradaada. Macaamiisha oo dhan waa inay bixiyaan cinwaan iimeyl si ay ugu oggolaadaan la xiriirka Wowowfaucet.com oo ku saabsan amarada la dhigo. Waxaan kuu soo diri karnaa emayl xaqiijin ah ka dib markaad iska diiwaangeliso annaga iyo sidoo kale ogeysiinta laxiriirta adeegga sida loogu baahdo (tusaale ahaan, xannibaadda ku meelgaarka ah ee adeegga dayactirka.) Waxaad sidoo kale soo gudbin kartaa cinwaanka emaylkaaga si aad u codsatid ogeysiin marka aan helno astaan ​​cusub, qaabka badeecada ama badeecada, ama inaad iska qorto joornaalka e-mailka iyo dalabyada gaarka ah. Waad ka bixi kartaa ama ka bixi kartaa emayllada mustaqbalka wakhti kasta.